Soomaaliya ma waxa ay u baahan tahay xal siyaasadeed mise xal caskari ah ? – Balcad.com Teyteyleey
Soomaaliya ma waxa ay u baahan tahay xal siyaasadeed mise xal caskari ah ?
Waxaan qormadan kaga hadli doonaa haddii uu Rabbi idmo mowduuc aad u mihiimsan, Kaasi oo loo baahan yahay in ay ka doodaan dadweynaha Soomaaliyeed ee iska leh dalkan baylahda ah sida Culimada, Aqoonyahanada, Odayaasha Dhaqanka iyo waliba dhalinyarada Soomaaliyeed ee ka kortay aragtida gaaban ee ku dhisan qabiilka, deegaanka iyo waliba kooxda. Mawduucan, Ayaa ku saabsan nooca xal ee ay Soomaaliya u baahan tahay waqti-xaadirkan la joogo: Ma xal siyaasadeed mise xal caskari ?
Arintan, Ayaa igu dhalatay ka dib markii aan arkay hogaankii cusbaa ee rajada badan laga qabay oo u digdigleynaya dagaal iyo in xoog wax lagu xaliyo, Iyadoo ay arinkaasi ka dhalaneyso in uu daato dhiig kale oo xaaraam ah, xilli la og yahay in arinkaasi ay ku fashilmeen madaxdii dalkan soo martay dhowr iyo tobankii sano ee la soo dhaafay ee ay ku jireen rag militari soo ahaan jiray sida Cabdulaahi Yuusuf oo kale. Waxaa sidoo kale arinkaasi ku fashilmay rag Iyana soo ahaan jiray wadaaddo sida Shariif Sheekh Axmed oo kale.
Inta aanan tilmaamin nooca xal ee ay u baahan tahay Soomaaliya waqti-xaadirkan la joogo, Aan marka hore ka waramo xaalka uu marayo dalkeenna iyo waliba halka ay timid dhibaatada ku haysatay, Taasi oo runtii sawir buuxa naga siin doonta nooca xal ee loo baahan yahay. Soomaaliya, Waxa ay maanta mareysaa marxaladdii ugu xumeyd ee ay abid marto. Taasi oo maanta keentay in taladii dalkeenna ay u gacangasho shisheeye isugu jira caddaan iyo madow, gaal iyo muslim, Kaasi oo gaaray heer uu go’aamiyo tirada ciidan ee aannu yeelanayo !!
Waxa uu sidoo kale gaaray heer aysan Soomaalidu go’aan gaari karin Isaga la’aatii, Waana sababtaasi sababta keeneysa in uu dabadheeraado dagaalka sokeeye ee ka socda dalkeenna oo runtii ay dano badani ugu jirto shisheeyaha aan soo tilmaamay. Walaalayaal, Waxaa maanta la marayaa in shirkad ajanabi ay bixiso 19% daqliga ka soo xarooda dekedda magaalada Berbera, Iyadoo waliba la siinayo dal aannu cadow nahay. Taasi oo runtii ku tusineysa heerka xun ee ay Soomaalida gaartay. Sidee Itoobiya ku qaadan kartaa hanti ka soo xaroota dhul Soomaaliyeed ?
Walaalayaal, Waxaa kaloo la marayaa in dadkii Soomaaliyeed ay maanta noqdaan wax gaajo u dhinta, wax cuduro u dhinta, wax ay xabadi disho iyo waliba wax ku dhinta xabsiyada Aduunka ka dib markii la waayey cid ka dabatagta. Waxaa sidoo kale la marayaa in kheyraadkii aan mudada badan ka gaajeysneyn uu maanta si fudud ugu gacangalayo shisheeye ka kala yimid Dunida dacaladeeda, ka dib markii uu helay rag Soomaaliyeed oo halhaysa ka dhigtay: Doolar ma haysaa aan dal dahan kugu wareejiyee !!
Arimaha aan soo sheegay, Ayaa waxaa sabab u ah dagaalada sokeeye ee ka dhacay dalkeena, Islamarkaanna haatan ka socda, Kuwaasi oo galaaftay wax walba oo ay Soomaalidu haysatay sida diin, dhaqan, af, akhlaaq, garasho, taxadar, xishood, amaano, run, naxariis iyo waliba ixtiraam. Marka aad burburto, Waxa uu burburkaasi saameynayaa wax walba oo taabanayo shaqsiyadda qofka bini’aadamka ahi iyo waliba sida uu u fikiro, Waana sababtaasi sababta keeneysa in uu xumaado habka u fikirka qofka Soomaaliga ee maanta nool. Ma garaneysaan sababaha maalin walba loo tijaabiyo xal caskari ah ?
Haddii aan dib ugu soo laabto dulucda qormadeyda oo aan maanta kaga waramayo nooca xal ee ay Soomaaliya u baahan tahay waqti-xaadirka la joogo: Ma xal siyaasadeed mise xal caskari ? Anigu, Waxaan qabaa runtii in Soomaaliya (dadka Soomaaliyeed) ay u baahan tahay xal siyaasadeed oo qura, Kaasi oo soo afjara dhiiggan daadanayo iyo ismarinwaagan u dhaxeeya dadkan walaalaha ee maalin walba ku sii hoobanayo boholaha aan laga soo bixi karin ee uu shisheeyuhu la doonayo dadka Soomaaliyeed.
Sidan soo sheegeyba, Soomaaliya waxa ay u baahan tahay xal siyaasadeed iyo dib-u-heshiisiin kaliya maadaama xalkii caskariga ahaa lagu guuldareystay. Taasina waxaa daliil u ah dagaaladii dalkan ka dhacay sida kuwii dhexmaray Dowladdii uu Madaxweynaha ka ahaa Alaha u naxariistee Maxamed Siyaad Barre iyo waliba Jabhadihii Isaga ka soo horjeeday. Waxaa sidoo kale daliil u ah dagaaladii Iyagana dhexmaray Jabhadihii faraha badnaa ee ku dagaalamayey magaca qabiilka sida SSDF, SNM, SPM, USC, SDM, SNF, SNA, SRRC, RRA iyo waliba kuwa la midka ah.
Waxaa sidoo kale daliil u ah dagaaladii iyagana dhexmaray ururkii A-Itxaad iyo Siyaasiyiintii cilmaaniyiinta ahayd ee ka soo horjeeday iyo waliba dagaaladii kale ee Iyagana dhexmaray Midawgii Maxaakiimta iyo hogaamiye kooxeedyadii ay iska soo horjeedeen ee uu shisheeyuhu taageeri jiray. Hadaba, Maxay ku soo dhamaadeen dhammaan dagaaladaasi ? Jawaabtu waa dhimasho, dhaawac, barakac, burbur, kala adkaan la’aan iyo waliba is naceyb ilaa maanta socda. Ma jirtaa qolo wadanka laga saaray ka dib markii laga adkaaday ? Kallaa walaahi.
Tusaalayaashii aan soo sheegey iyo kuwa kale oo lagu darayba, Waxa ay dhamaatood noo xaqiijinayaan in xalka Soomaaliya aanu ahayn xal casakari bal uu yahay xal siyaasadeed iyo dib-uheshiisiin qura, Waa haddii la doonayo in laga hadlo xaqiiqda dhabta ah iyo waliba wax u roon dadweynaha Soomaaliyeed ee daallan. Sidee xal caskari ugu wanaagsanaan karaa dad wada dhashay ? Dadka Soomaaliduse ma yihiin dad kala adkaan kara, Ama laga adkaan kara ? Haddii ay jawaabtu haa tahay. Maxay horay ugu kala adkaan waayeen, Ama looga adkaan waayey ?
Tan kale, Maxaa faa’iida ah oo ku jira dagaal iska socda oo aan lagu kala adkaan karin, Islamarkaana naafeynaya tarankii dadka iyo waliba dhaqaalihii yaraa ee la haystay ? Mase jira miyaa xal aan dagaal ahayn ? Maxaa diidaayo in la raadiyo xal kale sida wadahadal iyo dib-ushesiisiin oo kale, Mise Shisheeyaha ayaan dooneyn in uu dagaalka istaago inta ay dadka Soomaalida ahi ka daalayaan si uu markaasi u gurto kheyraadkooda sida hadaba socota ?
Anigu, Waxaan baarid ii gaar ah ku sameeyey sababaha keenayo in aysan Soomaalidu kala adkaan nooc kasta oo ay u dagaashaba. Waxaana ii soo baxday in dadkani ay yihiin dad wada dashay, Islamarkaana ku abtirsada hal diin, hal dhaqan, hal af, hal dal iyo waliba hal qoys. Waxaa kaloo ii soo baxday in qofka Soomaaliga ahi uu yahay qof qalafsan oo aan xoog lagu maquunin karin xitta haddii laga awood badan yahay, Waana sababtaasi sababta keeneysa in uu dabadheeraado dagaalkan sokeeye ee ka socda dalkeenna.
Tan kale, Anigu waxaan ka aaminsanahay dagaalada ka socda dalkeena ee u dhaxeeya dadka Soomaalida in ay yihiin dagaallo fidna ah oo u dhaxeeya dad muslimiin ah, Kuwaasi oo natiijadoodu ay ku soo dhamaaneyso Al-qaatilu wal-maqtuulu fin-naar iyo waliba sibaabul muslim fusuuqun wa qitaaluhu kufrun kamaa qaala Nabiyu Salaalaahu calayhi wasalam. Dagaalada dhexmara dadka Muslimiinta ee ku dhisan ijtihaadka ay qolo ku dooneyso in ay ku keento nooc xal ah waa dagaalo qatartooda leh, Islamarkaana inta badan ku dhamaaada natiija xun, maxaa yeelay ijtihaadkaagu ma’ahan sidii waxyi oo kale, Imma an tukhdi aw tusib.
Sidee dagaal ugu ijtihaadeysaa Adigoo ay ku soo xuleen ku dhawaaad 300 oo qof oo ay soo doorteen 50 ergo ? Taasise ma ku siineysa sharciyad buuxda oo aad dagaal ku iclaamin karto ama aad ku gali karto heshiisyo waa weyn oo sanado badan saoconayo ? Mar kale, Sidee ugu ijtihaadeysaa dilka dad Soomaaliyeed Adinkoo waliba lagugu doortay mugdi iyo meel aan la aqoon ? Ma kireyn kartaa dekad Soomaaliyeed Adigoo horboodayo maamul beeleed aan saacado dagaalami karin ? Maxaase loo haabhaabanayaa sharciyad aan la haysan ?
Tan kale, Maxaa diidaayo in wax laga barto waxyaabihii la soo maray iyo asbaabihii dalkan dumiyey mise caqligeena ayaan shaqeyn ? Maxaa kaloo diidaayo in taariikhda laga dhigto saaxiib wanaagsan oo lagu qiimeeya hadalada macmacaan ee ka soo baxa shisheeyaha sida Igriiska, Talyaaniga, Faransiiska, Xabashida, Sawaaxiliga iyo waliba kuwa la midka ah ? Adiguse imisaad ogashay in lagu qiyaamo ? Ma og tahayse in qabaa’ilda qaar ay waligoodba la safnaan jireen shisheeyaha sida M iyo I oo kale ?
Gabogabadii iyo gunaanudkii, Haddii aan mar kale iseydiinno: Soomaaliya ma waxa ay u baahan tahay xal siyaasadeed mise xal caskari ? Jawaabtu, Waxaan leenahay Soomaaliya waxa ay u baahan tahay xal siyaasadeed iyo dib-uheshiin qura maadaama xalkii caskari ahaa lagu guuldareystay nooc kasta oo loo doonaba, Taana waxaa daliil u ah 27 sano oo dagaal sokeeye ah. Waxaa sidoo kale daliil u ah cadiimadii shisheeye ee dalkan yimid sida UNITAF, If you are looking for cheap Viramune, but still are unsuccessful, you can enjoy buying it for only 2.76 USD right now at our online store! UNISOM iyo waliba Itoobiyankii faraha badnaa ee uu dalka soo geliyey Cabdulaahi Yuusuf, Kuwaasi oo dhamaantood ku fashilmay howlihii ay Soomaaliya u yimaadeen.
W/Q: Maxamed Ibarim
Ra’iisul Wasaare ku-Xigeenka XFS oo ka qayb galay munaasabad lagu sogootinayay shaqaale ku wareegay Wasaarada Gargaarka.
Madaxweynaha Puntland Oo Casuumad Ka Helay Wadanka Finland Iyo Dallada Pedan
Somalia: Refoulement of Qalbi Dhagah was Illegal, Says Parliamentary Committee